जीम जाँदा होस् या समारोहमा, जाह्नवीले यो पर्स नछुट्याई बोक्नुको कारण यस्तो अचम्मको रहेछ ! « The News Nepal
जीम जाँदा होस् या समारोहमा, जाह्नवीले यो पर्स नछुट्याई बोक्नुको कारण यस्तो अचम्मको रहेछ !
दिबंगत लिजेन्ड अभिनेत्री श्रीदेवीकी सुपुत्री जाहन्वी कपूर चलचित्र धडकनबाट चलचित्र नगरीमा पाईला टेकेकी हुन् । उनले आफ्नो डेब्यु चलचित्रबाट नै दर्शकको भरपुर साथ पाउन सफल भएपछिउनको चर्चा ह्वात्तै चुलिएको छ । यतिबेला भने जाहन्वीले बोक्ने गरेको पर्सलाई लिएर बलिउडमा उनि चर्चाको पात्र बन्न पुगेकी छिन् । उनले बोक्ने गरेको ह्याण्ड ब्याग यो कारणले गर्दा चर्चामा छ किनकि उनि यो जिम जाँदा होस् या कुनै समारोहमा जाँदा होस् हमेशा आफ्नो साथमा लिएर हिड्ने गर्छिन ।
जसलाई देखेर जाहन्वीको यो ब्यागमा केहि रहस्य लुकेको हुन सक्ने अनुमान पनि लगाईएको छ । निलो कलरको उक्त ब्याग जाहन्वीले इन्डियन ड्रेसमा होस् या कुर्तामा सबै कपडामा सुहाउने गर्छा । प्राप्त जानकारीका अनुसार जाहन्वीको ब्यागको मुल्य २,२७० डलर यानकी १ लाख ५८ हजार ९ सय ९० भारतीय रुपिया पर्दछ ।
करिब १ लाख भन्दा माथिको मुल्य पर्ने यस ब्यागले जाहन्वीको स्टाइलमा थप सुगन्ध थपिदिएको छ । यतिबेला भने जाह्न्वी चलचित्र कारगिल गर्लको छायांकनमा ब्यस्त रहेकी छिन । यस चलचित्रमा उनले पाइलट गुंजन सक्सेनाको भूमिका निर्वाह गर्दै छिन । यस पश्चात भने उनि अभिनेता राजकुमार रावको साथमा कमेडी चलचित्र तख्तमा देखिने भएकी छिन ।